Countly Analytics yeMafoni Ekushandisa Vanogadzira | Martech Zone
Countly Analytics yeMafoni Ekushandisa Vanogadzira
China, Gumiguru 18, 2012 Douglas Karr
Kana iwe uri mushandisi wekushandisa mbozhanhare kana kambani yako iine akawanda mafoni ekushandisa, echinyakare analytics haina kunyatso cheka. Dhawunirodha maitiro, mashopu ezvitoro uye mashandisiro maitiro idhi yakakosha inogona kukubatsira zvakanyanya kuwedzera kutengesa kana kurodha pasi, pamwe nekudyidzana kwevashandisi. Vanhu vauya kutarisira chiitiko chakasiyana pavanenge vachifambidzana pane mbozhanhare ... uye analytics inogona kukubatsira iwe kuwana mikana.
Countly iyi Analytics Platform inongotarisa kune vanogadzira nharembozha.
Kakawanda inopa yakafuma seti yezvinhu uye mabhenefiti:
Dashboard - Paunongovhura iyo dashboard, iwe unozoshamiswa kuona kuti zviri nyore sei kuongorora yako data neakajeka mifananidzo. Kakawanda dashibhodhi inokuratidza zvese panguva imwechete nenzira yakanakisa. Hapana chikonzero chekuchera mune akati wandei mapeji kuti uwane iyo ruzivo iwe rwaunoda. Tevera risingaperi nhamba yezvikumbiro ne Countly, uye chinja pakati ako maapp, mitambo uye maebook zviri nyore.
Maitiro Ekushandisa - Teedzera yako ye-in-kutenga kutenga neComply's tsika yechiitiko system. Tevera maitiro evatengi vako, uye zvikonzero zvekushungurudzika kuwedzera kubatikana uye kuvimbika. Tarisa vatambi vako padhuze kuti uve nechokwadi chekubudirira uye kuwedzera yako yemhepo mutambo wemari.
Vaka Zvishandiso Zvirinani - Kuverengera kunobatsira iwe kuyera uye kuyedza nharembozha yekuita kubatanidzwa uye kutorwa, zvichigonesa kukwidziridzwa kweyemukati zvemukati Yakadzikama mifananidzo inoratidza panowanikwa spike, ichibvumidza kuchera mune iro dambudziko pachayo kuti uwedzere mushandirapamwe wako. Countly inotsigira anotungamira epasirefoni mafoni, iOS & Android, uye kutarisira kuwedzera zvimwe kune urwu runyorwa.
Reports - Yakaverengeka inopa inoshamisa mishumo inosanganisira machati uye matafura, kuratidza maitiro ako ekunyorera kwakaitwa kune yakapihwa nguva. Kugadzira zvinyorwa zvemagetsi hazvina kumbove zviri nyore, nekuda kweiyo Countly inonakidza mushumo jenareta. Iwe unogona kuwedzera kana kubvisa mapeji kuburikidza neshumo jenareta uye sarudza mhando yechati kuti uratidze pane peji rega rega.
Mobile Kuwana - Usambofa wakarasikirwa nechero ruzivo rwakakosha nezve zvaunoshandisa kunyangwe uri mumusangano, mumugwagwa kana kungori padhesiki rako. Zviverengero zvemaapplication emafoni zvinopa zvakakwidziridzwa zvakanyanya usability uye visualization maficha. Tarisa chero emhando dzako dzekushandisa pamwe neyakareruka browser. Famba yako stats ekushandisa kubva chero kupi, chero nguva. Chinja chero imwe nguva yekumashure kuita yenguva inobereka.
Tags: countlymobile analyticsMobile Anwendungnharembozha app analyticsmobile app vanogadziranharembozha applicationnhare yekushandisa analyticsMobile Apps
Zvemagariro Midhiya uye zvevakadzi Hutano Zvigadzirwa